Inkonzo - Qingdao Zhuoya Machchan Co, Ltd.
Sinikezela ngenkonzo eyodwa yokumisa kuwo wonke amakhasimende ethu ngobuqotho.
Inkonzo yangaphambi kwalokho
Onjiniyela abangochwepheshe ukuhlinzeka ngezeluleko zangaphambi kokuthengisa nesiqondiso esisekela ukuhlela, njengokukhethwa kweyunithi, ukufanisa, ukwakhiwa kwamakamelo, ukuphendula imibuzo enzima ehlangatshezwe ngumsebenzisi ngesikhathi sokusebenzisa nokunikeza ukuholwa kwezobuchwepheshe.
Inkampani yethu izothumela izisebenzi eziqeqeshiwe nezobuchwepheshe esizeni sokufaka ukufakwa nokukhishwa kwiyunithi ngemuva kokuthola isaziso somsebenzisi, futhi yenze umsebenzi omuhle ngokwamukelwa ngumsebenzisi. Iyunithi ejwayelekile ebhekene nokuqondisa ukufakwa, ukuthumela.
Isikhathi sewaranti: kusukela ngosuku lokwamukelwa noma usuku lwemvume yonyaka owodwa eqoqwe amahora angama-1 000 (noma yikuphi kwenzeka), ngenxa yezingxenye zefekthri ezibuthene budedengu noma ukwakheka okungafanele nokukhethwa kwezinto ezingavuthiwe nezinye izizathu zabangela ukulimala noma enye into iphutha, kungaba nesibopho sewaranti ngumphakeli.
Sihlala sinamathela embonweni ophakeme wokuzibophezela, ukuhlinzeka ngohlelo lwensiza oluthuthukisiwe olufaka ukufundiswa kokufakwa, ukuqondiswa kwencwadi yokusebenza okuningiliziwe, ukuqeqeshwa kwenqubo okuphelele, indlela efanele yokuphatha yabasebenzi, ukusiza abalingani bethu ukuxazulula konke ukukhathazeka ngesikhathi esifanele ekukhiqizeni okuzayo.
Ukuqinisekisa ukusebenza okuhle komugqa wokukhiqiza, sizohlela umuntu onguchwepheshe wezobuchwepheshe ukuze ezohlala lapho ukuze athole usizo oludingekayo, kuze kube yilapho ulayini uqhubeka kahle futhi uqhubeka isikhathi esithile.
Ngesikhathi sesikhathi sewaranti, izingxenye zomzimba ezingashukunyiswa ngumuntu zizothathelwa mahhala, futhi isikhathi sewaranti siyohlehliswa ngokufanele. Ukushintshwa kwezingxenye ezingaphandle kwenkathi yesiqinisekiso kuzonikezwa ngesikhathi futhi kukhokhiswe izindleko kuphela.
Ukuthi phakathi nesikhathi sewaranti noma cha, sizophendula kungakapheli amahora amabili lapho sithola imininingwane yokuqhekeka komugqa womshini. Uma kudingekile, sizohlela umuntu wezobuchwepheshe ukulungisa umugqa womshini ngaphambi kwesikhathi. Abasebenzi bethu ngeke bahambe kuze kube yilapho kususwe isimo sephutha futhi umugqa usebenza kahle.
Ukuqinisekisa ukusebenza kahle komugqa wokukhiqiza, ngaphezu kwemininingwane esetshenzisiwe yombhalo, sizophinde sihlele nabasebenzi bobuchwepheshe ukuqeqesha ukusebenza, abasebenzi bokugcina amakhasimende, kuze kube yilapho bezokwazi kahle zonke izinqubo zokusebenza nokulungiswa ngokuphelele nangekhono.
Sizovakashela isikhathi esingaphansi kwesisodwa unyaka nonyaka ngemuva kokuthengisa komshini wethu. Ngemibuzo evela kumakhasimende, sizokwenza ukulungiswa okungathi sína ukuze senze imishini yangaphambilini izame ukubamba imfuneko ngaphansi kwesimo esisha.
Sinikezela ngezinsizakalo zokubonisana kwezobuchwepheshe zesikhathi eside kubalingani bethu mahhala.
Isikhathi sewaranti siyoba unyaka owodwa kusukela ngosuku lokwamukelwa kokugcina.